सुन्दरहरैंचा र पथरीमा भएका सवारी दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु - निष्पक्षखबर
सुन्दरहरैंचा र पथरीमा भएका सवारी दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु
विराटचोकः मोरङका दुई छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
हिजो राति साढे ७ बजे मोरङको पथरी शनिश्चरे–२ मा प्रदेश १ –०२–०४७ प ००१५ नम्बरको मोटरसाइकलले पैदलयात्री स्थानीय ५० वर्षीया बिमला खड्कालाई ठक्कर दिएको थियो । ठक्करका कारण घाइते भएकी खड्काको उपचारको क्रममा विराटनगरको कोशी अस्पतालमा मृत्यु भएको हो ।
यसैगरी, मंगलवार साँझ मोरङकै सुन्दरहरैचा नगरपालिका–११ मा साइकललाई जोगाउने क्रममा को ३३ प ४२४१ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना भएको थियो । सो दुर्घटनामा सोही मोटरसाइकलमा सवार ३० वर्षीया देवकुमारी श्रेष्ठ घाइते भएकी थिइन् । उनलाई उपचारको लागि नोबेल अस्पताल विराटनगर पठाइएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ ।
दुवै घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
शेयर बजार सुस्त, ८५ करोडको पनि भएन कारोबार
ब्राउन सुगर सहित १ जना पक्राउ
सुनको भाउ १०० रुपैयाँ बढ्दा चाँदीको घट्यो १५ रुपैयाँ
विराटचोकः आज सुनको भाउ बढेको छ भने चाँदीको भाउ घटेको छ । सुनको भाउ तोलामा १ सय रुपैयाँ बढेको छ । चाँदीको भाउ तोलामा १५ रुपैयाँ घटेको छ ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको भाउ प्रति तोला ९७ हजार ८ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । तेजाबी सुनको भाउ प्रति तोला ९७ हजार ३ सय र असली चाँदीको भाउ प्रति तोला १ हजार २ सय ४० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
हिजो सुनको भाउ तोलामा ४ सय रुपैयाँ बढ्दा चाँदीको भाउ तोलामा १० रुपैयाँ बढेको थियो ।
आजदेखि हिमालयन हाइड्रोपावरको आईपीओ बिक्री शुरु
विराटचोकः हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ ।
सो कम्पनीले प्रतिशेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यका ९ लाख कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुका लागि निष्काशन गरेकोमा २ लाख ८१ हजार ७ सय ५० कित्ता मात्र बाँडफाँड भएको थियो । बाँकी ६ लाख १८ हजार २ सय ५० कित्ता सहित कुल १९ लाख ६८ हजार २ सय ५० कित्ता साधारण शेयर बिक्री शुरु गरेको हो ।
निष्काशन गरिने कुल शेयरमध्ये २ प्रतिशत अर्थात् ३९ हजार ३ सय ६५ कित्ता शेयर कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशत अर्थात् ९८ हजार ४ सय १३ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषमा बाँडफाँड गरिएको छ । सर्वसाधारणले बाँकी १८ लाख ३० हजार ४ सय ७२ कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
निष्काशन बन्द छिटोमा असार १९ गते हुनेछ भने ढिलोमा असार २९ गते हुनेछ । आईपीओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृतिप्राप्त गरेका सम्पूर्ण सी–आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यसका साथै मेरो शेयर एप तथा वेबसाइटबाट पनि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ ।
आज राष्ट्रिय धान दिवस
विराटचोकः असार १५ गते आज राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै छ । नेपाली समाजमा आजको दिनलाई दही चिउरा खाने पर्वका रुपमा पनि चिनिन्छ ।
वि.सं. २०६१ मंसिर २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले २०६२ असार १५ गतेदेखि राष्ट्रिय धान दिवस मनाउन थालिएको हो । आजको दिन असारे भाकामा लोक लयका गीत गाउँदै धान रोप्ने र हिलो छ्यापाछ्याप गरेर रमाइलो गर्ने चलन छ ।
अर्थ3 years ago
खेलकुद3 years ago
अर्थ2 years ago
मुख्य3 years ago
प्रदेश नं. १2 years ago